Ekuliri m: bụghị na mụ onwe m obi ụtọ banyere ya — HunterThinks.com
The ozi ịntanetị
Google egbochi ndị ọnụ ọgụgụ nke ndị nnata nke ọ bụla email na 100 adreesị. N'ihi na m bụ isi na kọmputa na-agbajikwa, M nwere iji ihe ochie nkwado ndabere akwụkwọ nke m kọntaktị na ndepụta. M na-dezie ndepụta–M dị nnọọ mere a dị mfe iyo na jidere ọ bụla email na m kọntaktị na ndepụta. M mebiri na ndepụta n'ime iche iche nke 100 na zitere ndị na-esonụ ozi ịntanetị. N'ihi na onye ọ bụla email, M mere a ngwa ngwa Doppler nke na nnata na ọ bụrụ na m hụrụ a nlereanya, mgbe ahụ, m gbanwetụrụ na email ubé.
mere taa? Iji lee ihe ndị mere taa ma ọ bụ ụnyaahụ, ma ọ bụ ọbụna ndị ikpeazụ nke ọnwa, ga-adị mkpụmkpụ ụzọ nke ọma. The nsogbu malitere ọbụna tupu m chụọ n'ọrụ–mgbe m onyeisi bụ ihe mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na anya karịa na ndị mmadụ na-egbochi mpụ.
Afọ ise nke otu ebe ọdịda bụ nke ukwuu. Ị pụrụ iji na-agụ banyere mgbasa ọrụ, ma m n'aka ma ọ bụrụ na a ga-eme ka ị na-eche mma ma ọ bụ njọ.
M wee mkpụrụ ọgwụ ụfọdụ. M ga-ada n'ụra anya, na m nke ukwuu na-achọghị na-eteta. Ọ bụrụ na mmadụ na-ekpebi ime ihe, biko adịghị elekwasị anya na ọbọ megide ndị mere omume rụrụ arụ na ihe megidere iwu ihe. Biko-elekwasị anya na-agbanwe agbanwe na anyị omenala na-ekwe ndị a na-eme na na-agbanwe agbanwe anyị politico-usoro iwu.
isiokwu: ụfọdụ ndị ga-enwe obi ụtọ
N'ezie, ọkàiwu ga-enwe obi ụtọ, na ndị Carroll County ga-enwe obi ụtọ, n'ihi na ọ bụ ihe fọrọ nke nta ụfọdụ ugbu a na ọ dịghị onye ga-lee anya na ihe ndị na-eduga na taa.
isiokwu: ndi-iwu ga-enwe obi ụtọ
Ụfọdụ ndị mmadụ na a ndepụta na ọkàiwu, na ha ga-eche na enyemaka. Rute ugbu a, ọ dịghị onye na-akwụ ụgwọ ntị na iwu na-akwadoghị ihe mere m ma ọ bụ na absurdities na iwu na usoro nke US na UK. Ọ bụrụ na m nwụrụ anwụ, ọ fọrọ nke nta ụfọdụ na iwu ga- “azụmahịa dị na mbụ”, nke na-erite uru ndị dị ugbu a na-ọkàiwu na ndị na-ugbu a na ike. Congrats gị niile.
isiokwu: Carroll County enweta nkwanye
Congrats ka Carroll County n'ihi na ugbu a ị na-enwe nsogbu banyere onye ọ bụla na-agbalị iji belata gị nwaanyị ihe (dị ka m mere) ma ọ bụ kpee ikpe ndị mmadụ maka mmekọahụ ime ihe ike (Brinkmeier ga ma na-eleghara ikpe ma ọ bụ na-eleghara ikpe–ma ọ bụrụ na Aceley Ezi bụ eru na ihu ebubo mgbe otú o si eru iji ndidi a nna?). O wutere m na m na-aghọta na ị chọrọ developmentally nkwarụ ụmụ gị asị ga-metọrọ.
isiokwu: Congrats, Peggy
isiokwu: Scott Brinkmeier enweta nkwanye ọzọ
Ma otu n'ime ndị kasị mmeri bụ Scott Brinkmeier. Ọ dịghị onye ga-ele anya n'ime ya bụ iwu na-akwadoghị omume na ARDC sobpona. 1) Ọ laghachiri niile nke akwụkwọ ya na-achọ ka ịlaghachi. 2) Ọ gụnyere akwụkwọ na-adịghị na ya faịlụ ma ndị kama na faịlụ nke ikpe alaka. Na ndị akwụkwọ e kwesiri na-echebe site nzuzo iwu ndị o leghaara. 3) Ọ chepụtara dịkarịa ala otu akwụkwọ na-eme ka omume ya anya ziri ezi. Ma ọbụna tupu, ọ maara na-agba m ka m bụ ekwekọghị n'ụkpụrụ, ma o were a gbakọrọ ize ndụ m na-agaghị eme ihe ọ bụla banyere ya, na–brilliantly–ọ na-akpọ a nzukọ pụrụ iche nke na-asị osisi agbasa ọrụ maka ya iwu na-akwadoghị omume. Congrats, Scott, ị merie ọrụ gị, ma ị na-ere gị ike n'ezi. Nke ahụ bụ a magburu onwe ya banyere izi gị na ụmụ agbọghọ. Ma nke N'ezie ị dịghị mgbe ọ ga-agwa ha eziokwu nile banyere gị na omume.
isiokwu: congrats bụ iji
Congrats ezinụlọ m, oke. Ha ugbu a ga-esi Bibie onwe ha ikpe ọmụma ha. Ha nwere ike ịgwa ndị enyi ha na ha gbalịrị inyere m aka ma na ọ dịghị ihe ha pụrụ ime. Enyi ha ga-emere ha ebere na ịgbaghara ha.
Amaghị m otú ọtụtụ awa m ede. M ka groggy: echiche m bụ onye na-adịghị ma ọ bụghị isi. M ọtụtụ ihe ndị ọzọ anuri karịa m bụ ụbọchị abụọ gara aga, karịsịa n'ihi na nna m, Ma hogan anyị, ugbu a na-agbalị soro m ala na forcibly-achịkwa ndụ m. E nwere ihe ole na ole ndị ọzọ okwu rụrụ arụ karịa na-atụ egwu gị na nna.
Categories ARDC, Ma hogan anyị, nna m, Ndụ m Tags Ma hogan anyị, Death and dying, Deathwish, Domestic violence, Google, enweghị olileanya, Nzuzo, Scott Brinkmeier, Subpoena, igbu onwe post igodo